5 Day Njem Site Milan Site Train | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Day Njem Site Milan Site Train
(Emelitere ikpeazụ On: 16/01/2020)
Ọ bụ ike họrọ naanị 5 Easy Day Njem Site Milan Site Train ịkọrọ gị. Italy ejiji isi obodo na-resplendent na nhọrọ maka ndị na-eleta ndị njem nleta. Ọ bụghị naanị na ọ na-ejupụta na ejiji, ma o nwere ihe ịrịba akụkọ ihe mere eme, ije na mara mma to write home about.
1. 5 Day Njem Site Milan Site Train: Lake Como
Mbụ anyị Easy Day Njem Site Milan bụ Italy atọ kasị ukwuu ọdọ maka ụbọchị ụgbọ okporo ígwè, na-enweta a dara oké ọnụ ụgbọ gburugburu mmiri ya. Ụzọ ka mma iji na-enweta pụtara Alpine mma si ụta nke ụgbọ mmiri, nakwa dị ka na-ohere iji a zoro ezoro Peek na ndị mara mma waterside Njirimara na ya n'ikperé mmiri.
The Central nke ebe Lake Como bụ kasị gara akụkụ nke ọdọ, na ọ bụ ezie na n'ebe ugwu na n'ebe ndịda ebe nke ọdọ-enwe n'ebe ha na-mmasị ndị a bụ n'ozuzu obere nnukwu: n'ezie, nile na isi na-adọrọ mmasị nnọọ nso ọnụ bụkwa adaba n'ihi na ndị ọbịa na-enwechaghị oge.
Cheta na mgbe ụfọdụ obodo dị nso ọnụ, ma iche iche site ọdọ! Nsogbu adịghị, e nwere mgbe niile ferries gafee ọdọ ka njem na dị mfe (ụgbọ ala ferries bụ ugboro ugboro na-arụ ọrụ site na ole na ole ụgbọ mmiri ọnụ karịa njem ferries).
Florence na Como Ụgbọ oloko
Milan ka Como Ụgbọ oloko
Turin ka Como Ụgbọ oloko
Genoa Olee otú Ụgbọ oloko
I nwere ike iju gị anya na Switzerland bụ nnọọ a ụbọchị njem n'ebe Italy isi obodo. Iwuli elu na Bernina Express si Tirano na ị ga-ahụ na dị nnọọ abụọ na ọkara awa.
Na njem ya bụ uru ọ: na nke a bụ steepest tren njem na ụwa, arịgo site na 429 mita ruo n'elu 1800 in the Swiss mountains. The stunning alpine scenery viewed from the train window will mean you will not want to leave the train.
Ị ga-ejedebe na Swiss obodo nke St. Moritz, otu n'ime Switzerland kasị ama ugwu ntụrụndụ. This is where the rich and famous spend their holidays or own a chalet.
St. Moritz bụghị ahụkarị sinik Alpine obodo. Anyị na-eche na dara oké ọnụ bụ a ọzọ kwesịrị ekwesị nkọwa karịa mara mma. The gbara ya gburugburu ebe mara mma ezie na jikọtara na pụrụ iche ikuku nke obodo, a magburu onwe ezumike bụ nnọọ na-ekwe nkwa.
St. Moritz na-eme ka a zuru okè isi inyocha ndịda nke of Graubünden. Ọ bụghị a mma isi n'ihi na ụbọchị njem n'akụkụ ndị ọzọ nke Switzerland, dị ka ndị ga na-ukwuu njem oge. ọ bụ, Otú ọ dị, onye nke anyị n'elu 5 Day Njem Site Milan Site Train ezie! E wezụga nightlife na obodo, ndị isi-eme ebe a bụ n'èzí. Ọ bụrụ na ị na-amasị hiking, ıgw `ma ọ bụ oyi egwuregwu, i nwere ike onwe gị obi ụtọ maka izu nke a pụtara region.
Bergamo ka Tirano Ụgbọ oloko
3. 5 Day Njem Site Milan Site Train: Bergamo
A nleta Bergamo na-jikọtara na a njem Lake Como, ma ọ bụ nke ọma uru ya ebe anyị 5 Day Njem Site Milan Site Train ndepụta!
Na akụkọ ihe mere eme mgbidi ndinyanade mbịne ise kilomita iji tụọ ya gburugburu ochie obodo, na hiri nne ochie ije anya na, o nwere ịrịba aghụghọ maka njem nleta na-achọ a mara mma ebe ya na-ụbọchị.
Gbaa ịnyịnya na funicular na ala n'elu nke obodo, ma na-a lee anya na Bergamos ịrịba ncheta, dị ka St. Maria Maggiore Katidral na Colleoni banye n'Ụlọ Ekpere.
ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, echefula na-a oge ịghọta Bergamo ịrịba daputara, na ugwu nta ndinyanade mbịne maka kilomita, ahụ na-ala anya Lake Como.
Milan na Bergamo Ụgbọ oloko
Mantua na Bergamo Ụgbọ oloko
Olee otú Bergamo Ụgbọ oloko
Azụ Cremona na Bergamo
The Franciacorta region awade ụfọdụ ikpọ, award emeri mmanya n'ihi na ị na sample, na n'etiti mara mma Italian mma.
-Ohere izute wine na-emepụta onwe ha! Jụọ ajụjụ banyere usoro nke winemaking, na ihe na-eme ka ha akpan akpan ika nnọọ ụtọ.
The Franciacorta DOCG ebe a na-ugbua ka enwere banyere 3,000 hectare vine ekpuchi ụfọdụ ebube sinik Rolling n'ókèala nnọọ n'ebe ndịda nke Lake Iseo na Italys Lombardy region. Nke a bụ n'ime agbụpụ anya nke ọtụtụ ndị ọzọ a ma ama Italian wine na mpaghara, dị ka Piedmont n'ebe ọdịda anyanwụ na Conegliano Valdobbiadene (home of super adịchaghị Prosecco) to the east.
Nke a praịm ọnọdụ na-eme ka Franciacorta a zuru okè ebe maka a ihunanya getaway ma ọ bụ a ọma kwesịrị wine njem, dị nnọọ ihe awa ịkwada si Milan, it is accessible and beautiful in equal measure.
The boutique wineries nke Franciacorta n'ezie ime na-enye ihe pụrụ iche, ma shopping nwekwara oké oke! The Franciacorta imewe tinyekwa nwere ọtụtụ bargains na-enye a savvy shopper, wee jide n'aka na-aka gị na ngwongwo ebe a.
Cremona na Brescia Ụgbọ oloko
Bergamo na Brescia Ụgbọ oloko
Milan na Brescia Ụgbọ oloko
Treviglio na Brescia Ụgbọ oloko
5. 5 Day Njem Site Milan Site Train: Venice
Anyị ndepụta 5 Day Njem Site Milan Site Train ga-ezu na-enweghị gụnyere Venice! Olee ihe pụrụ ịdị mma karịa na-ewere a ụbọchị njem si Milan ka otu n'ime Italy kasị oké ọnụ ahịa ihunanya obodo, Venice? Ọ bụ ezie na ọ bụ ike dabara niile Venice utọ n'ime naanị otu ụbọchị, ị nwere ike na-agbalị.
Awagharị ya jụụ, cobbled n'okporo ámá. Nwere a kọfị ke ọwọrọetop Piazza San Marco. Perhaps even stretch to riding a gondola through the canals for a truly special experience.
Ị ga ịrụ ụka adịghị-kwesịrịnụ urà site sachaa laguunu. Enwe kediegwu ije na e ji mara onye nke Italy kasị ewu ewu obodo maka njem nleta.
Ọ bụrụ na ị ka nwere oge, onyeisi otu nke Venice nso agwaetiti. Murano bụ ma ama maka iko ịfụ omenala, na ma eleghị anya na-azụ a trinket na-azụ n'ụlọ.
Njikere ahụmahụ 5 Day Njem Site Milan Site Train? Gaba na n'elu Save A Train ugbu a! Ọ dịghị zoro ezo ụgwọ, dịghị hassle!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Easy Day Njem Site Milan Site Train” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/day-trips-milan-train/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / zh-CN na / fr ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
Bergamo comolake Daytrips EuropeByTrain milan Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ njem
Atụmatụ N'ihi ejegharị Europe Naanị Site Train